यदि CreateUnoValueलाई निर्दिष्ट Uno प्रकारमा रूपान्तरण गर्न नसकेको खण्डमा त्रुटि आउछ । रूपान्तरका लागि, TypeConverter सेवा प्रयोग हुन्छ ।
यो प्रकार्यले अवस्थाहरूको प्रयोगका लागि विचार दिइको हुन्छ जहाँ Uno प्रकार रूपान्तरित कार्याबलिलाई पूर्वनिर्धारित आधाभुत अपुर्ण हुन्छ । यो हुन सक्नलाई जब तपाईँ कुनै इन्टरफेसहरूमा आधारित रहेर जेनेरिक पहुँच बढाउनलाई कोषिस गर्नुहुन्छ जस्तै आधारभूत LibreOfficeबाट XProperty सेट::setPropertyValue( नाम, मान ) वा X???कन्टेनर::insertBy???( ???, मान ), । आधारभूत रनटाइमले ती प्रकारहहरूलाई संयोजन गर्दैनन् यद्यपि तिनीहरू अनुरूप सेवाको रूपमा मात्रै परिभाषित छन् ।
कुनै मान बिना पासगर्नलाई तपाईँ यो प्रकार्य पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तर यो स्विकार्य बयान होइन ,। यदि आधारभूत लक्षित प्रकार थाहा भईरहेको खण्डमा CreateUnoValue() प्रकार्यको प्रयोग गर्दा थपरूपान्तरित सञ्चालनहरू मात्र नेत्रित्व गर्न सक्ने छ जसले आधारभूत कार्यन्वयनलाई विस्तारै बन्द गर्दछ ।